Governemanta Ao Azerbaijana: Raharaham-Pianakaviana! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Marsa 2017 8:25 GMT
Ny 21 Febroary, nambaran'ny filoha Ilham Aliyev, fa i Mehriban Aliyeva vadiny no mety handray ny toeran'ny Filoha Lefitra Voalohany eo amin'ny firenena. Toerana vaovao vao noforonina io taorian'ilay fitsapankevitra natao vao haingana momba ny hanovàna ny lalàm-panorenena ary niteraka resabe, fitsapankevitra izay nadikan'ireo mpandinika marobe an'io firenena tsy refesi-mandidy io ho toy ny fampiroboroboana ny fahefan'ireo fianakavian'ny mpitondra.
Raha efa azoazon'ny rehetra an-tsaina ihany ny momba ilay vaovao, zavatra tsy voavidy vola kosa ny sasany tamin'ireo fanehoankevitra teny anivon'ireo mpampiasa ny media sôsialy ao anatin'ity firenena iray ity, izay matetika no mihatra tsy tapaka amin'ny fahalalahana maneho hevitra ny fanampenambava ataon'ny governemanta.
Ato ho ato rehefa mipetraka mba hisakafo i Aliyevs, dia ho vaovao lehibe tahaka ny hoe “vao avy nivory nandinika ny resaka fandriampahalemana ny mpitarika ny firenena”.
Fanomezana tokony ho tamin'ny Andron'ny Mpifankatia saingy taraiky.
Fianakaviana maha-te ho tia izahay, Fianakaviana maha-tehotia izahay [tsilalaonteny; Mehriban midika hoe maha-te ho tia amin'ny teny Azerbaijani].
Ny fianakaviana no fototry ny fiarahamonina.
Toa indray mandingana sisa dia ho lasa Claire Underwood i Mehriban Aliyeva #HouseofCards
Tsy iombonan'ny sasany hevitra ny filazàna hoe ‘Fanomezana tokony ho tamin'ny Andron'ny Mpifankatia saingy taraiky’ io, tamin'ny filazàna fa ‘Fanomezana mialohan'ny Fotoana ho fankalazàna ny Andro Erantany ho an'ny Vehivavy’ io, izay marihana rehefa 8 Martsa ary ankalazaina miaraka amin'ny firehetampo fony mbola tao anatin'ny Firaisana Sovietika. i Rinat Balgabayev, Facebooker malaza ao amin'ny fari-dranomasina Kaspiana, an'i Azerbaijan ao Kazakhstan mpifanila vodirindrina aminy, nilaza hoe:
Notendren'ny filohan'i Azerbaijan ho Filoha Lefitra ny vadiny. Ahoana no hahafahantsika (lehilahy) handokandoka an'ilery amin'ny 8 Martsa ?
Saingy ireo hafa mahafantatra kokoa dia nilaza fa mety ho fanomezana avy amin'iny Filoha Aliyev io ho an'ny fitsingerenan'ny andro nanaovana ny marian-dry zareo, ny 22 Febroary …
Fa ireo mpanadihady lalina dia nahita ilay fanendrena ho fanamarihana amin'ny fomba ofisialy ny fanombohan'ny fifehezan'ny fianakaviana tokana ao Azerbaijàna, hatramin'ny fanamaintisana bebe kokoa ny fijerena ny zon'olombelona ao amin'ny firenena.
Nanoratra toy izao ilay gadra politika fahiny, Anar Mammadli:
Tohizan'ny governemanta eto Azerbaijan ny mampivanàka izao tontolo izao. Na teo aza ireo fiandràsana, tsy nisy fifidianana parlemantera na filoham-pirenena natao. Nandritry ny alina, namboarina ho ofisialy ny fitondràm-pianakaviana.
Raha nanoratra toy izao i Khadija Ismayil, mpikatroka malaza erantany, izay vao haingana no navotsotra avy any am-ponja :
Na dia tonga amin'ny fampitambàrana ara-poltika aza i Ilham sy i Mehriban mba hanomezana fahatsapàna hoe rafitra fehezin'olon-tokana no misy ao Azerbaijan, mendrika ho marihana fa efa nifandovàna ny fahefana tao amin'io firenena io. Tamin'ny 2003, Aliyev, 55 taona, nandova fahefana avy amin'ny rainy Heydar, sekretera voalohany tao amin'ny antoko kaominista fahiny, izay nitondra an'i Azerbaijana hatramin'ny nialànay tamin'ny Firaisana Sovietika sy nahazoany ny fahaleovantenany tamin'ny 1991